Friday April 12, 2019 - 16:55:15 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dagaal culus ayaa maanta gelinkii dambe ka qarxay isgoyska Sanca ee degmada Kaaraan wuxuuna markii dambe dagaalku ku fiday dhanka degmada Shibis.
Goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in khasaara dhimasho iyo dhaawac leh uu kala gaaray ciidamadii dhaxdooda dagaallamayay, dagaalka ayaa bilaawday kadib markii ciidamo Melleteri ah oo watay gaadiidka Tiknikada ay xoog ku jiireen jidgooyo ciidamada Booliska utiilay isgoyska Sanca.
Mid kamida gaadiidkii Tiknikada oo ay wateen ciidamada Melleteriga oo ka yimid dhanka degmada Balcad ee Sh/dhexe ayaa ku gubtay isgoyska Maana Booliyo halkaas oo uu ka dhacay dagaalka ugu khasaaraha badan.
Ciidamada Booliska iyo kuwa Melleteriga ayaa dagaalka isku adeegsanayay qoryaha dhashiikaha loo yaqaan iyo PKM waxaana jira khasaara dhimasho iyo dhaawac ah oo dadka shacabka ah kasoo gaartay hubkii lays dhaafsanayay.
Xiisada udhaxeeya ciidamada Booliska iyo kuwa Melleteriga ayaa lagasoo sheegayaa degmooyinka Kaaraan, Yaaqshiid iyo Shibis balse lama oga in dagaalladan ay saameyn ku yeelan karaan howlgallada ay maleeshiyaadka dowladda Federaalka ka wadaan xaafadaha magaalada Muqdisho.
Kumanaan askari gadood ah oo ka yimid dhanka degmooyinka Sh/dhexe ayaa maalmihii lasoo dhaafay kusii qulqulayay degmooyinka gobolka Banaadir waxayna ku hanjabeen in madaxda dowladda ay ugu tagayaan xafiisyadooda haddii aan lasiin lagacaha mushaaraadka ah ee ka maqan.